Layma's World: Heart ထိပါ သည်…
Posted by lay-ma at 4:23 AM
ဘီလိုဖြစ်တာလဲ လေးမရယ်။ ကြားရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ နောက် tag game ဆော့မယ်ဆို မောင်သင်္ကြန် နံပါတ်1 ရေးချင်ပါတယ်ဗျို့။ အဲ.. ရေးဖို့ နဲနဲတော့ ကြာတတ်တယ် :P
အနော်တို့ လဲဘာမှမသိလိုက်ပါလားဗျာ ပျော်၇အောင် tag game ဆော့ပါတယ်ဆို စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး....
ဘီလိုပဲဖစ်ဖစ် တီးလေး အနိုင်ကျင့်လို့ ၇သော ၊ မညီးညူသော သူတွေထဲမှာ ကျနော်လဲပါတယ်နော့် ဆရာ့လိုတော့ မကြာဘူး ကျနော်က လက်သွက်တယ်လေ ပေါက်ကရရေးတဲ့ နေ၇ာမှာ... ဟားဟား ညစ်မနေနဲ့ဖွင့်ချလိုက် ဂလိုတွေက ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ...
ဘာမှလုပ်မနေနဲ့ ညစ်မနေနဲ့ ကစ်သာကစ် မကြိုက်ရင် မရေးပလေ့စေ ...။ လေးမ လုပ်ချင်သာလုပ် ..အားပေးတယ် .. အဟီး ကျွန်တော်လည်း ညစ်နေလို့ လူမိုက်စကားပြောတာ .. ။ စိတ်ထဲထားမနေနဲ့ .. သူ့အကြောင်း သူသိ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိ ..။ နော့
မဟုတ်ဘူးလား ဒေါ်ကိတ်ခြောက် ဟတ်ဟတ် အဆင်ပြေပါစေဗျာ ..။ အကြွေးတော့ ဆိုင်းဦးနော် လမကုန်သေးလို့ :P
:D စတာနော် ပျော်အောင်လို့။ တက်လာရင်တော့
ပျော်ပျော်ပဲ ပြန်တက်လိုက်မယ်။ :P
မီ အားတော့ ရေးပေမယ်နော်.. နဲနဲကြာတယ်.. သေချာစဉ်းစားနေလို့ :P .. ဆောရီးနော် .. ;)
နောက်နောင် ဘလော့နားမယ်ဆိုရင် အောက်ပါလူကြီးလူကောင်း ၄ဦးဆီမှာ အရင်ဆုံး ခွင့်တိုင်ရမယ် :P အဟီး
သတိ/ ကိုကောင်းကင်ကြီးကို ပြန်တိုင်မည် :P :P :P
စိတ်မညစ်နေနဲ့ အမရေ သူ့စိတ်နဲ့ သူပဲလို့ မှတ်လိုက်တော့။ စုဖရားလတ် နောက်ဆက်တွဲ မျှော်နေမှာနော်။ မင်းကျန်စစ်က စုဖုရားလတ်ကို ထိပ်ခေါက်လိုက်တယ်လို့ ပြန်ရေးပေး :D
ွှအဲ .. ကျန်သေးတယ် အနော့ကို ဟပ်တယ်ဆိုပါလား။ မနက် အိပ်ယာထကတော့ နောက်ကျနေလို့ ကျောင်းအမြန် သုတ်ချေတင်လိုက်ရတာ ရေအိမ်တောင် ဝင်လိုက်ရဘူး။ ငါ့ အမ ဘာကိုများ ဟပ်လိုက်ပါလိမ့် ခွိ ခွိ ခွိ။ အပျော်နောက်တာ အမရေ... ။ ဒါပေမယ့် အမှန် မပြောပြ၇င် ခေါ်ဘူး။ တိုးတိုး တိတ်တိတ် လာပြောနော်။ ကြောင်မျိုးက သိချင်တာ မေးမရလို့ ချောင်းနေတာ။ နှစ်ကိုယ်ကြားလေး ပြန်ပြောပြ :P
စိုးထက် - Soe Htet ! ... ကျွန်တော် ရေးထားတာပါ .....
" ကိုယ် မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို " လို့ ရေးထားပါတယ် ... ကိုယ် လုပ်ချင်လို့ (သို့)လုပ်နိုင်လို့ (သို့) အားလုံး ပျော်စေချင်ဖို့ ဆိုရင် တက်ပါဗျာ ... အပန်းမကြီးပါဘူး ... အကြွေး လိုကြီး မနေတတ် ... မရေးတတ် လို့ပါ ... စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး ... တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ... လွန်သွားတယ် ဆိုရင် ...
ကျွန်တော်က ဘယ်သူမှ ပြန်ပြီး တက်ခဲ့ ဖူးခြင်း မရှိပါဘူး ... ဒါ့ကြောင့် တက်ရတာ ပျော်စရာ ကောင်းမကောင်း မသိပါ ခင်ဗျာ ... အတက်ခံရရင်တော့ ... နည်းနည်း စိတ်ရှုပ်ပါသည် ...
စိတ်တော့ မကောင်းဘူး ရေးထားတာ ... ကျွန်တော်က မခင် တတ်သလို ဖြစ်နေတယ် ...
စာရင်း ပေးသွားပါတယ် ... တက်ဂိမ်း မနှစ် သက်တဲ့ အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ...
စိုးထက် - Soe Htet ! ပါ ခင်ဗျာ ...
အငြင်းပွားမှုတွေ ရပ်သွားအောင် ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ ရေးခြင်း နားလိုက်ပါ ပြီ ...
လေးမရေ.. tag ထားတာ စိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုမှ.. သူများကလေ ရေးဖို့ နည်းနည်းကြာတာပဲရှိတာ.. :D :D
လေးမခင်လို့ tag ခံရလို့ ပျော်ပါတယ်ဟေ့... ပျော်တယ်ဟေ့.. :D ချိတ်မဆိုးနဲ့တော့..နော် :)
မမလေးရေ.... အဲဒီစာသားလေးကို ကျွန်တော်လည်း ကိုစိုးထက်ကြီးဆီမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျ။ စိတ်ထဲကတော့ နည်းနည်းတွေးလိုက်သေးတယ်... ကိုစိုးထက်ကြီးက တက်တာမကြိုက်ဘူး ထင်တယ်လို့။
*** ကိုစိုးထက်ကြီးကိုလည်း ဘလော့ပြန်ရေးပါလို့.... ***
သြော်.. ဒါနဲ့.. ကျွန်တော်ကတော့ တက်ခံရတာပျော်တယ် မမလေးရေ... ။ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ကို သတိတရရှိတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အတွက် အားလည်းတက်မိတယ်။ နောက်လည်း ချန်မထားနဲ့နော်..။
I don't wanna involve like this case, but all sides are my friends and it's enough to express.
We can ignore, even bitter past, why not, if we know the art of ignore, if we know the art of giving understanding, it's will discover beauty itself.
Friends, why not, ...we can be on the same ground.